Trano fisakafoanana lafo indrindra eran-tany | News Travel
Mariela Carril | 28/04/2022 17:00 | Nohavaozina amin'ny 30/04/2022 01:29 | gastronomy, Ibiza
Tiako ny toerana mahafinaritra nefa tsy manam-bola be aho, ka tsy maintsy mionona amin'ny fahitana azy ireo amin'ny fahitalavitra na amin'ny gazety. Lazaiko foana fa raha manam-bola be aho dia handany izany amin'ny fandehanana any amin'ireny trano fisakafoanana sy hotely ireny ho an'ny millionaire, tsy ho an'ny serivisy fa ho an'ny toerana, traikefa ary tsiro atolony.
Raha resaka trano fisakafoanana, Inona no trano fisakafoanana lafo indrindra eran-tany? Eny ary, miovaova indraindray, fa toa izao dia a trano fisakafoanana espaniola inona no ao Ibiza: hand Sublimation.
Raha manana vola be ianao dia afaka mandeha mankafy ny serivisy amin'ity trano fisakafoanana any Ibiza, Espaina ity. Notokanana tamin’ny 2014 ary famoronana hevitra ny Paco Romero, iharan'ny lohalaharana amin'ny sakafo ara-tsakafo eto amin'ny firenena. ampy ny milaza fa manana 3 Repsol soles ary kintana Michelin roa. Tsy misy ratsy.
Ny zavatra atolotr'ity trano fisakafoanana ity dia mihoatra noho ny lovia, fa iray manontolo traikefa nahandro izay fantatro manambatra ny teknolojia, gastronomy ary fampisehoana. Ny zava-drehetra miaraka, fa mazava ho azy, ny nahandro dia ambony indrindra ny kalitao satria ao ambadik'izany ny chefs Dani García, Toño Perez, Diego Guerrero ary David Chang ary ny chef chef Paco Torreblanca.
Ny marina dia ao anatin'ny tontolo iray izay misy fiovana foana, ny hevitry ny trano fisakafoanana dia ny mandroso dingana iray amin'ny gastronomy ary tsy manolotra sakafo tsotra sy tsotra fotsiny, fa traikefa. Amin'izao fotoana izao, amin'ny sehatra rehetra, toa ny tsy maintsy atao dia ny manome ny serivisy fa ny traikefa izay manalefaka araka izay azo atao.
Noho izany, ao ny sakafo, ao ny mpamorona, ao ny illusionista, ao ny teknisianina, ny mpamorona setroka, ny mpitendry zavamaneno, ny mpanoratra soratra sy ny maro hafa. Manodidina ny mpihinana dia misy seho tena izy, amin'ireo izay hita ao Hollywood na Broadway foana ny kalitao sy ny hakingan-tsaina.
amin'ny sublimation misy toerana ho an'ny olona 12 ihany izay tsy ao anaty latabatra maromaro no apetraka fa ao anaty iray. Ny sakafo sy ny vahiny no mpandray anjara ary manomboka amin'ny fotoana hipetrahanao eo amin'ny latabatra dia manomboka ny fampisehoana. Fampisehoana manana, amin'ny haavon'ny tranokala, teknolojia manara-penitra mba hahatonga azy io ho tsy hay hadinoina tokoa. Ary inona ny teknolojia resahina? Ny zava-misy virtoaly...
Ny hevitra dia ny mpihinana afaka mandeha tsy miala ny seza, manova toerana, misy a lalao sary, jiro, projections isan-karazany sy ny mozika. Ary mandritra izany fotoana izany, ankafizo ny sakafo misy sakafo hafakely maro. Ny sakafo kosa dia ahitana Lovia 14, zava-pisotro ary tsindrin-tsakafo roa. Indray mandeha, ary mitohy hatramin'ny farany ny dia.
Ny sakafo dia manomboka amin'ny cocktail, whisky tena lafo vidy izay mitentina 240 euros ny tavoahangy iray. Ampy izay ny filazana fa vita tanana izy io ary misy hanitra maro be ary tsy hanahirana ny lanilaninao sy ny oronao ianao satria izy io no zavatra malefaka sy hafahafa ary matsiro indrindra eran-tany. Ary mazava ho azy fa tsy hoe manompo azy tsotra fotsiny izy ireo ka fanombohana tsara izany.
Tsy mitovy foana ny sakafo, nefa azo antoka fa hahita maro ianao mpamokatra ranomasina, ohatra ny oyster voatsindrona, betsimitsitekiteky, hareza na akoho. Rehefa misy trondro sy akorandriaka ny sakafo lasa ranomasina sy ny halaliny ny efitrano manontolo. Maivana, loko...
Avy eo ovay ny sehatra mety ho ao anatin'ny hamafin'ny ala ianao mihinana holatra sy anana na any amin’ny tanàna italiana, miaraka amin'ny mozika avy amin'ny The Godfather, manandrana legioma zaridaina. Avy eo dia tonga ny anjara amin'ny fampiasana solomaso tena zava-misy. Noho izany, miditra tanteraka amin'ny zava-misy virtoaly izay manome anao izahay fampahalalana momba ny ingredient amin'ny zavatra hohaninao miaraka amin'ny fomba fiomanana ao anaty video.
Azonao sary an-tsaina ve izany? Tsy Blade Runner ve izany? Ary rehefa mieritreritra ianao fa amin'ny taonjato faha-XNUMX mety hiseho tampoka amin'ny lamasinina kanto ianao ary hafa tanteraka ny sakafo eo ambony latabatrao. Tsy mitsahatra miaina zava-mahagaga ny vava sy ny maso.
Misy toerana ho an'ny kianja na cirque? Ary koa, fa ny vokatra amidy dia lovia, ary ny tsirony, tsy mbola nandramanao. Heverinao ve izany tono hena mahazatra ve izany? Eny, fa amin'ity indray mitoraka ity ny mozika sy ny dihy, ary, mahagaga, ny whisky dia miseho indray fa miaraka amin'ny tsiro hafa, mifoka, izay miverimberina ao amin'ny saosy barbecue. Tsarovy izany eto ny zava-pisotro no tena tsara ampiarahana amin'ny sakafo aroso, noho izany ny chef dia nieritreritra tanteraka ny zava-drehetra. Ny lovia tsirairay dia manana tsiroaroa amin'ny zava-pisotro ary ny mifamadika amin'izany.
Farany, ny tsindrin-tsakafo izay tonga miaraka amin'ny chef isaky ny fisakafoanana izay manomana izany eo no ho eo, eo anilany. Mety ho sponjy yaourt, crème dibera, mousseline orange... Ny tsindrin-tsakafo faharoa dia mitondra sôkôla miaraka amin'ny whisky vaovao izay, tsy azo ovaina, dia lafo be. Ao anaty vera izy io fa ao anatin'ny tsindrin-tsakafo ihany koa, manondraka ny mofomamy miaraka amin'ny tsirony hazo.
Tsy haiko raha be ny lovia, misalasala aho, fa eto ianao dia mandoa zavatra hafa tanteraka. Ary ohatrinona ny karama? Manodidina ny 2000 euros isaky ny sakafo hariva. Na dia toa be dia be aza izany, dia tsy ratsy mihitsy raha jerena fa miresaka momba ny trano fisakafoanana iray any Ibiza isika izay mety ho eo anelanelan'ny 250 ka hatramin'ny 600 euros ny fisotroana raha toa ka marika tsara. Ny fidirana ao amin'ny Pacha, ohatra iray hafa, dia manodidina ny 500 euros isan'olona, ​​ka raha miresaka momba ny vidiny isika dia tsy avy amin'ny planeta hafa ny Sublimotion.
Ny tsara indrindra dia izay manana euros ao am-paosiny dia afaka mandoa ary ho eo amin'ireo mpihinana roa ambin'ny folo ireo. Koa amin'ny vintana rehetra mety ho olo-malaza ny iray amin'ireo mpiara-mianatra aminaod iza no mahalala? Ny marina dia raha vonona ianao mandoa manodidina ny 1600 euros Hiaina traikefa lehibe ianao, tsiro, fampisehoana, serivisy, ny zava-drehetra dia tena tsara ary tsy hay hadinoina. Amin'ny teny roa: zava-kanto culinary.
Misy olon-tsotra vonona handoa vola be amin'ny sakafo hariva ve? Azo antoka fa misy olona vonona handoa lafo vidy amin'ny tapakila hijerena ny fiadiana ny amboara eran-tany. Na tsia? Toa tena afa-po tokoa ny mpihinan-kanina, ka raha tianao ny traikefa mihoatra noho ny fividianana zavatra, dia afaka mieritreritra ny hampiasa vola amin'ny alina tsy hay hadinoina ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Ibiza » trano fisakafoanana lafo indrindra eran-tany